Milaza Ho Mitondra Ny Tena Feo Ara-javakanto Ny Sehatra Ara-kolontsaina Palestiniana Iray ao Haifa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Febroary 2018 16:34 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, Ελληνικά, русский, Español, English
Sehatra tao amin'ny Manjim. Nahazoana alalana avy amin'i Rana Asali ny sary rehetra.
Ity manaraka ity dia lahatsoratra fiarahamiasa avy amin'i Mangal Media. Nahazoana alalana ny famoahana azy indray.
Mihaona ao amin'ity toerana vaovao mampietanentana ity ireo mpanakanto vao misondrotra, mpiahy, mpahay siansa maditra sy izay rehetra mitady fifanakalozan-kevitra; toerana azo antoka hahazoana traikefa sy zavakanto hafa.
Manjm (منجم), izay midika hoe “harena ankibon'ny tany” na “zaitra tsara” dia laboratoara ara-javakanto izay mihantsy ny zavatra rehetra antenaina. Miorina ao akaikin'ny toeram-piantsonan'ny Fiara-dalamby ao Haifa (ampahany amin'ny lalamby Hijaz), ny moske Al Istiqlal, ny Tsangambaton'ny Mpanjaka Faisal, ny Tsenan'i Flea ao Haifa sy ny Manodidina an'i Wadi Salib izy. Nanangana ny toerana ho toy ny “Faritra Mizakatena Tsy Maharitra” ho fanomezam-boninahitra an'ilay poeta sady anarsista Hakim Bey ireo mpanorina an'i Manjm, Rabia Salfiti sy Tamer Kais.
Sehatra ao amin'ny Manjim. Nahazoana alalana avy amin'i Rana Asali ny sary rehetra.
Harona lalina sy fandraisana hevitra i Manjm. Ny fandaharan'asan'ity toeram-pamoronana ity dia ahitana fampiratiana zavakanto sy laboratoara – toerana hitrandrahana ny tontolo midadasiky ny zavakanto sy ny kolontsaina amin'ny alàlan'ny fomba fijery maro samihafa, izay manomboka amin'ny fotoana fitantarana am-bava, atrikasa, resadresaka, fifanakalozan-kevitra ary fifanakalozana traikefa. Anisan'ny fandaharan'asa hafa ny sakafo hariva miafina, horonantsari-mihetsika ambanin'ny tany sy fandefasana horonantsary karakarain'ireo mpiahy mifandimby isam-bolana. Amin'ny fiafaran'ny fandefasana horonantsary, misy ny adihevitra sy ny fampisehoana zavakanto. Namana marobe milatsaka an-tsitrapo hampisy zavatra no manampy ireo efatra matanjaka mpanorina (ny toerana).
“Rehefa mandeha ao amin'ny toerana, mahatsiaro ianao fa mbola asa eo an-dalam-pivoarana izany, ary izany indrindra no irinay ho azy, mandeha ao amin'ny galeria mbola tsy vita ianao, toerana iray ahafahanao manao andrana moramora. Izany no fomba nananganana ny fiarahamonina “, hoy i Rabia Salfiti, mpanorina sady mpanakanto manan-kevitra:” Toerana mbola tsy vita manasa ny olona handray anjara, hahazo fahafaham-po sy mahatsiaro fa anisan'ny ao anatin'ny toerana. “
Ny fananganana firosoana iombonana dia zava-dehibe amin'ny Manjm. Novatsiana tamin'ny alalan'ny famatsiam-bola isan-karazany sy fanomezana avy amin'ireo mpanorina azy ny habaka ary miankina amin'ny fandraisana anjaran'ny mponina mba hampielezana ny fandehan'ny asa.
Ny gorodona hazo – napetrak'ireo mpanorina sy ny namany fa tsy mpanao asa tanana matihanina- dia manaporofo ny fahavononan'ny vondrona mba hamorona sehatra fandinihana ny hevitr'izy ireo manokana sy ny fahavononana hiarahiasa.
“Zavakanto sy kolontsaina tena izy”
Haifa, tanàna misy mponina 300.000 izay misy an'i Manjm, dia ao anatin'ny fanjakana Isiraely amin'izao fotoana izao izay miorina mafy ao anatin'ny sisintany Palestina ara-tantara. Ahitana ny firoboroboan'ny zavakanto sy kolontsaina Palestiniana tato ho ato ny tanàna, satria mitaky ny kolontsaina, ny maha-izy azy sy ny habaka ireo mponina Palestiniana ao an-tanàna.
Tahaka ny any amin'ny fanjakana nozanahana rehetra, naka ny zavakanto sy kolontsaina Palestiniana i Israely ary mampiasa izany indray ho an'ny Palestiniana, manala ny marika famantarana azy sy ny tompony. Ao no irin'ny Manjm hanomezana ny zavakanto sy kolontsaina mahaleotena, tsy mitady fanenenana ary tena izy.
Toerana hafa ao Haifa izay mitovy hevitra tahaka an'i Manjm ny Kabareet, toeram-pisotrosotroana sy fivoahana amin'ny alina izay naorin'ny vondrona ambanin'ny tany, Jazar Crew, ary koa ny trano teatra Khashabi, fikambanana tsy miankina ahitana ireo mpanao tantara tsangana Palestiniana, ny Scene Music Bar, Fetiben'ny Filma Mahaleotena ao Haifa, ary koa ireo atrikasa ambanin'ny tany sy tsy miankina hafa. Ireo rafitra rehetra ireo dia miara-miasa mba hampahaleo-tena ny saina sy ny fanahin'ireo mponin'i Haifa.
Dingana voajanahary sy fototra izany, vokatry ny firindrana voajanahary, sy ny fitohizan'i Haifa nandritra ny taona 1930 sy 1940, raha niroborobo manerana ny tanàna ny klioba sy ny toeram-pisotroana kafe Pan Arabo. Vetivety dia nopotehin'ny mpanjanaka Israeliana- ny Nakba izany – tamin'ny taona 1948.
Manasa ny “Wild Children (Ankizy Mirenireny)” manerana izao tontolo izao i Manjm mba handray anjara. Misy amin'ny tenin'i Hakim Bey manao hoe, “Ny Ankizy Mirenireny ihany no tena maniry tokoa ny hizara ny anjara ratsy mahazo ireo mirenireny na ireo mpiady anaty akata tsy ampy taona fa tsy mibaiko izany, ny hany afaka mahatakatra fa fihetsika mitovy ihany ny fifamihinana sy ny fisarahana- mpanakanto, anarsista, vetaveta saina, diso lalana, andian-jiolahy hafa manokana (tahaka ny avy amin'izao tontolo izao) na afaka mihaona ihany amin'ny maha-ankizy mirenireny, mandinika latabatra fisakafoanana raha miafina ao ambadiky ny sarontavany ireo olon-dehibe “.
Tao anatin'ny roa volana monja, nahavita nampiantrano fampiratiana ara-javakanto roa ny toerana, (samy naharitra iray volana), tsena ara-tsakafo Palestiniana (antsoina hoe Tetikasa Kayan), fandefasana sarimihetsika roa amin'ny hariva (Cinema Al Bahja), ary atrikasa dimy sy hetsika fahazoana traikefa ara-javakanto. Hisy ny hetsika fampahafantarana ofisialy ho atao amin'ny 27 Febroary 2018.
Ao amin'ity toerana mahatalanjona ity, ho lasa mahafinaritra sy mamiratra amin'ity fahavaratra ity i Haifa.